Ihe nlere kachasị mma m chọtara na Blog m Martech Zone
My blog emeela nnọọ a bit nke ntị na-adịbeghị anya ọnwa na folks e gabiga ókè ụdị ha kwuru. Eziokwu ahụ bụ na ndị mmadụ na-ewepụta oge na-akwụ m otito ma ọ bụ na-ekele m dị egwu. Ọ na-akpali m n'ezie ịgbalị itinyekwu mgbalị na post ọ bụla. Enweela m ụfọdụ ọmarịcha echiche kemgbe m malitere blog, mana m ga-ekenye gị leta a. Ọ mere ka ụbọchị m! Ọ bụkwa ihe akaebe banyere mmetụta ole blog nwere ike inwe. Tupu edetu a, amabeghị m na Mitch bụ onye na-agụ… lelee ederede ya:
Abụ m onye na-agụ ogologo oge na onye na-edebanye aha na blog gị. Achọrọ m ịgbanye gị ozi ịntanetị ka ị mara ihe m na-eme.
Onwe m na enyi m, ma ụmụ akwụkwọ gụsịrị akwụkwọ na Mahadum McGill dị na Montreal, Canada, amalitela ụlọ ọrụ nkwado ndị ahịa n'ịntanetị. Anyị jiri ọtụtụ nkuzi sitere na blọọgụ gị wee mepụta ụlọ ọrụ ọhụrụ anyị.
A na-akpọ ụlọ ọrụ anyị ClixConnect ma na-enye ọrụ dị egwu maka inye nkwado ndị ahịa n'ịntanetị. Ihe anyị na-eme bụ inye ọrụ nkata na-akparịta ụka nke ọma maka weebụsaịtị ndị mmadụ (na-eji obere bọtịnụ nkata na-ahụ na weebụsaịtị). Ndị nwe weebụsaịtị nwere ike ịza ajụjụ maka mkparịta ụka mgbe ha dị, yana mgbe ha adịghị, onye si na ụlọ ọrụ ịkpọ oku anyị ga-aza ajụjụ na nnọchite ha, 24/7/365.
Nke ahụ bụ ọkara ọhụụ. Akụkụ nnukwu ihe nke ClixConnect bụ na anyị nwekwara teknụzụ ọhụụ na sọftụwia anyị nke na-enyere ndị ahịa aka ịkata nkata akpaaka, dabere na ngwaahịa ha na-ele. Ya mere kwuo na mmadụ na-ele uwe elu na-acha ọbara ọbara na weebụsaịtị, windo nkata na-akpaghị aka nwere ike ịpụta na-atụ aro uwe elu na-acha anụnụ anụnụ.
Anyị nọrọ ihe dị ka ọnwa 6 na-eme atụmatụ nke a, ma soro ndị Canada, US, Romania na Pakistan rụkọọ ya.
Naanị m chọrọ ime ka ị mara na nghọta ndị ahụ Martech Zone enyerela anyị aka iru ebe anyị nọ taa, ma anyị nwere ekele maka ya.
Mitchell Cohen kwuru
Mahadum McGill BCom 2008
Enwere m otuto efu! Lee akwụkwọ ozi dị ịtụnanya. Enweghị m ike ịgwa gị uru ole ederede ahụ baara m. Kachasị mma na Clixconnect, Mitch! Aga m elele ngwa gị ma ga-agbasi mbọ ike iwetara gị ọdịnaya na-enyere aka!
Mee 18, 2007 na 9: 06 AM
Nke ahụ dị ezigbo mma, ọkachasị sitere na nwa akwụkwọ. 18 ọnwa gara aga, otu onye ọrụ m gawara Schoollọ Akwụkwọ Gụsịrị Akwụkwọ na Europe. Ọ gara izu 4 gara aga wee gwa m na usoro PR na usoro azụmaahịa m kesara ya na ọrụ ebe a, enyela ya ikike dị asọmpi n'etiti ndị ọgbọ ya. N'oge ahụ, ọ maghị.
O metụrụ m n'ahụ nke ukwuu n'ihi na ọ bụ ezigbo mmadụ, ọ ga-emekwa ọtụtụ ihe dị ukwuu na ndụ ya.
Ekwenyesiri m ike na enwere ọtụtụ ndị ọzọ dị ka Mitch ndị ọrụ gị nyere ike.
Mee 18, 2007 na 9: 28 AM
Daalụ Neil… ihe na akwụkwọ ozi dị ka nke a bụ n'ezie ihe na-akpali akpali karịa ego ọ bụla. Ọ dị m ezigbo mma ịgụ nke a.
Otutu blọọgụ m ka ewulitere na nkwupụta, yabụ ekwenyere m na ọ bụ ihe edeturu na anyị niile nwere ike inwe obi ụtọ!
Mee 19, 2007 na 6: 34 AM
Mkparịta ụka m na-enweta site na ịnweta ihe bụ akụkụ kachasị akwụ ụgwọ nke ide blọọgụ m, ọ na-enyere m aka ịgbalịsi ike ịdịkwu mma.
Ọ bụ nnukwu akụkọ Doug, na ngwaahịa ha mepụtara bụ echiche dị egwu, enwere m ike iche banyere iji ya n'ọdịnihu.
Enweela m ọtụtụ n'ime ndụmọdụ gị na blọọgụ m ugbu a ọ dị nso ndị na - agụ akwụkwọ 200 (naanị ọnwa ole na ole) na feedburner, nke ahụ bụkwa nke kpatara gị.
Gaa n'ihu ezigbo ọrụ,
Mee 19, 2007 na 9: 27 AM
Opal: Nne na -eri anụ
Mee 21, 2007 na 6: 34 AM
Amaara m na nke ahụ mere gị obi ụtọ! Okwu ndị dị otú ahụ na-eme ka ị nwee mmetụta pụrụ iche.
Enwere m ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị na-eche nche na blọọgụ m ọtụtụ n'ime ha na-ezitere m email site n'oge ruo n'oge na mgbe ụfọdụ ha na-apụta
“Kwuo” mgbe ụfọdụ ihe ha na-ekwu na-emetụta m karịa ndị m na-agụ ya mgbe niile n’ihi na ọ tụghị anya ha. 🙂
M chọtara weebụsaịtị gị ihe dị ka nkeji iri abụọ gara aga. Agụọla m site na post gị ọtụtụ ugbua ma edenyere m aha / jikọtara gị ka m wee nwee ike ịlaghachi mgbe m nwekwuru oge.
Anọ m na-echesi echiche ike banyere iwe blọọgụ m na ọkwa ọzọ yana ozi sitere na weebụsaịtị, dịka nke gị, ga-enyere m aka ịgbanwe nrọ m ka ọ bụrụ eziokwu.
Anọ m na-ede blọgụ ruo ihe karịrị afọ abụọ, ihe mgbaru ọsọ m, n'ime ọnwa ole na ole gara aga na-agbanwe.
Mee 21, 2007 na 6: 46 AM
Daalụ Vegan Momma! Aga m na-enyocha saịtị gị dị ka nke ọma. Adịghị m onye anaghị eri anụ, mana enwere m nkwanye ùgwù dị egwu maka nraranye ọ na-ewe. Ma n’ezie, ị bụ mama, ọrụ kacha sie ike! Abụ m naanị otu nna m wee nwaa (ma daa) iyi okpu abụọ.
Mee ka m mara ma m ga - enyere gị aka n’ihe ọ bụla!
Mee 21, 2007 na 7: 06 AM
Aga m ajụ ajụjụ. N’ebe a amaghi m ihe m ga aju! Ire, maka blọgụ m ka bụ ihe ọhụụ nye m. Ana m ege ntị, na-agụ, ma na-amụ ihe.
M a na-alụbeghị nne na ee m maara ihe ị na-eche banyere-agbalị na-eyi ma okpu. 🙂